Tirada magangalyo doonka iyo Yurub | Somaliska
Sweden ayaa ka mid ahayd wadamada ay dadka ugu badan iska dhiibeen Sanadkii la soo dhaafay. Faransiiska, Germalka & Sweden ayaa noqday 3da wadan ee dadka ugu badan ay magangalyada ka dalbadeen. Cilmi baaris lagu sameeyay 14 wadan oo ka tirsan Yurub ayaa lagu soo bandhigay warbixin ku saabsan soo galootiga iyo meelaha ay xiisaynayeen ama ay magangalyo ka dalbadeen. Guud ahaan 14kaas wadan waxaa iska dhiibtay 240 648 qof sanadkii 2010ka. Markii la eego tiradaas is bedel weyn kuma imaan tirada dadka iska dhiibay wadamadaas guud ahaantooda balse isbedelo weyn ayaa ku yimid sida ay dadku isaga dhiibeen wadan wadan. Germalka ayaa ahaa wadanka siyaadada ugu badan ay iska dhiibeen markii loo barbar dhigo sanadkii 2009 kaaso ay iska dhiibay 26836 qof halka 2010ka ay iska dhiibeen 41332 waa kor u kac gaaraya 54%. Sweden ayaa sidoo kale isbedel la taaban karo ku yimid tirada magangalyo doonka ayadoo siyaaday 32%, sanadkii 2009 ayaa waxaa iska dhiibtay Sweden 24 194 halka 2010ka ay yimaadeen 31 819. Sweden ayaa ahayd wadanka 3-aad ee dadka ugu badan ay magangalyada ka dalbadeeden. UK ayaa nambarka afaraad gashay halkaasoo ay iska dhiibeen 22 088, waa hoos u dhac gaaraya 26%. Wadamada hoos u dhaca ugu weyn ku yimad ayaa waxaa ka mid ahaa Norway oo hoos u dhacu gaarayay 42% waxaa iska dhiibay Norway guud ahaan 10 064 qof. Finland ayaa hoos u dhac ku yimid ayadoo ay iska dhiibeen 4018 oo keliya. Denmark ayaa sidoo kale magangalyo doonku hoos u dheceen. Ireland iyo Spain ayaa noqday wamada ay dadka ugu yar iska dhiibeen ayadoo dadka labo kun ka yar ay iska dhiibeen. Guud ahaan dadka iska dhiibay 14ka Wadan ee cilmi baarista lagu sameeyay ayaa intooda badan waxay ka yimaadeen Afghanistan, Somalia iyo Serbia balse wadama waa loo kala badnaa, tusaale ahaan Faransiiska dadka ugu badan ee iska dhiibay waxay ka yimaadeen Kosovo, Ruushka iyo Bangladesh. Germalka waxay inta badan yimaadeen Afghanistan, Ciraaq iyo Serbia. Sweden ayaa dadka ugu badan waxay ka yimaadeen Serbia, Soomaaliya & Afghanistan halka Ingiriiska ay tirada ugu badan ka yimaadeen Iran, Pakistan iyo Zimbabwe. Migrationsverket.se
Sweden ayaa ka mid ahayd wadamada ay dadka ugu badan iska dhiibeen Sanadkii la soo dhaafay. Faransiiska, Germalka & Sweden ayaa noqday 3da wadan ee dadka ugu badan ay magangalyada ka dalbadeen.
Cilmi baaris lagu sameeyay 14 wadan oo ka tirsan Yurub ayaa lagu soo bandhigay warbixin ku saabsan soo galootiga iyo meelaha ay xiisaynayeen ama ay magangalyo ka dalbadeen. Guud ahaan 14kaas wadan waxaa iska dhiibtay 240 648 qof sanadkii 2010ka.
Markii la eego tiradaas is bedel weyn kuma imaan tirada dadka iska dhiibay wadamadaas guud ahaantooda balse isbedelo weyn ayaa ku yimid sida ay dadku isaga dhiibeen wadan wadan.
Germalka ayaa ahaa wadanka siyaadada ugu badan ay iska dhiibeen markii loo barbar dhigo sanadkii 2009 kaaso ay iska dhiibay 26836 qof halka 2010ka ay iska dhiibeen 41332 waa kor u kac gaaraya 54%.
Sweden ayaa sidoo kale isbedel la taaban karo ku yimid tirada magangalyo doonka ayadoo siyaaday 32%, sanadkii 2009 ayaa waxaa iska dhiibtay Sweden 24 194 halka 2010ka ay yimaadeen 31 819. Sweden ayaa ahayd wadanka 3-aad ee dadka ugu badan ay magangalyada ka dalbadeeden. UK ayaa nambarka afaraad gashay halkaasoo ay iska dhiibeen 22 088, waa hoos u dhac gaaraya 26%.
Wadamada hoos u dhaca ugu weyn ku yimad ayaa waxaa ka mid ahaa Norway oo hoos u dhacu gaarayay 42% waxaa iska dhiibay Norway guud ahaan 10 064 qof. Finland ayaa hoos u dhac ku yimid ayadoo ay iska dhiibeen 4018 oo keliya. Denmark ayaa sidoo kale magangalyo doonku hoos u dheceen.
Ireland iyo Spain ayaa noqday wamada ay dadka ugu yar iska dhiibeen ayadoo dadka labo kun ka yar ay iska dhiibeen.
Guud ahaan dadka iska dhiibay 14ka Wadan ee cilmi baarista lagu sameeyay ayaa intooda badan waxay ka yimaadeen Afghanistan, Somalia iyo Serbia balse wadama waa loo kala badnaa, tusaale ahaan Faransiiska dadka ugu badan ee iska dhiibay waxay ka yimaadeen Kosovo, Ruushka iyo Bangladesh. Germalka waxay inta badan yimaadeen Afghanistan, Ciraaq iyo Serbia.
Sweden ayaa dadka ugu badan waxay ka yimaadeen Serbia, Soomaaliya & Afghanistan halka Ingiriiska ay tirada ugu badan ka yimaadeen Iran, Pakistan iyo Zimbabwe.